UNCHR oo sheegtay 500 oo ruux inay ku geeriyoodeen Badda Mediterranean-ka – STAR FM SOMALIA
UNCHR oo sheegtay 500 oo ruux inay ku geeriyoodeen Badda Mediterranean-ka
Hay’adda UNHCR ayaa shaacisay tirada dadkii ku dhintay Badda u dhaxeysa dalalka Masar iyo Talyaaniga oo musiibo ay ka dhacday, kadib markii doon ay la socdee dad badan ay qalibmatay.
UNHCR ayaa sheegtay dadka badda ku geeriyooday inay gaarayaan 500 oo ruux, inkastoo UNHCR ay tilmaamtay in aanan laheyn tiro sax ah oo ku aadan dadka dhintay, balse tiradan laga soo xigtay dadkii la badbaadiyay.
Afhayeen u hadlay UNHCR ayaa intaas ku daray in la badbaadiyay oo kaliya 41 qof oo u badan rag, taasina ay muujinayso inaysan hakad galin musiibooyinka ka dhacaya badda Mediterranean-ka.
Dadka la badbaadiyay ayuu sheegay inay ka kooban yihiin 23 Soomaali ah, 11 Itoobiyaan ah, lix Masaari ah iyo qof u dhashay dalka Suudaan.
Dowladda Federaalka Somaliya ayaa iyadu sheegtay in shilkaas ay ku dhinteen Somali tiradoou gaareyso laba boqol oo qof oo doonayay inay sharci darro ku tagaan Qaarada Yurub.
Muhaajiriin ay tiradoodu gaareyso 25 kun oo qof oo badankood ka tagey dalalka Afrikada Bari iyo Suuriya ayaa sannadkan gaaray dalka Talyaaniga.
Dowladda Ruushka oo sheegtay Somaliya inay hub ka iibinayso
Madaxweynaha Somalia Oo Khudbad Ka Jeediyay Machad kuyaala magaalada Washington